[Review Sách] “Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?”: Hãy Sống Theo Cách Mà Bạn Cho Là Mình Nên Sống | Anybook.vn - Anybook
[Review Sách] “Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu?”: Hãy Sống Theo Cách Mà Bạn Cho Là Mình Nên Sống | Anybook.vn
Nikasa hividy an’ity boky ity aho tamin’ny fotoana nahatongavany ho be mpividy indrindra, saingy maty izany rehefa nilaza tamiko ny namako iray hoe: “Efa novakiako izy io, mankaleo, fanampiana ho an’ny tena fotsiny.” Amiko dia tsy voatery hoe genre tsy mendrika hovakiana akory ny hoe self-help, fa azo antoka fa izay mahazo an’ity commentaire ity dia tsy afaka ny hatahotra alohan’ny hanindriana ny bokotra “order” sa tsy izany? Satria be dia be ny boky nofinofy tsy mbola voavidy hapetraka eo amin’ny talantalana, nahoana aho no hividy boky izay tsy azoko antoka na hamaky na tsia. Fa nahoana aho no afaka mipetraka eto ary manoratra famerenana ity boky ity? Heveriko fa misy antony ny zava-drehetra ary ny fipihanao amin’ity lahatsoratra ity dia mety hanokatra varavarana mahaliana ho anao.
Tamin’ny faran’ny taom-pianarana, dia nahazo boky avy amin’ny ray aman-dreny ny kilasiko manontolo ho tambin’ny asa mafy nataony. Ary anisan’izany Ohatrinona ny lanjan’ny tanora? Nivavaka tamin’andriamanitra aho hoe: “Avelao aho handray boky hafa” fa ny marina dia nohazoniko teny an-tanako ilay boky ary nieritreritra aho hoe: Eny, raha omenao ahy, dia ekeko, fa mbola maro ny tsy voavaky. boky, indraindray mandany fotoana ny famerenana mamaky teny. Ary noho izany dia navelako tsara teo amin’ny talantalana boky nandritra ny 2 volana. Nandeha tsy nisy sakantsakana ny vakansy fahavaratra, mbola nandry teo am-pandriana aho ary ni-surf facebook. “Ohatrinona ny hasarobidin’ny tanora?”, Nitraka teo amin’ny talantalana aho ary nanontany tena aho ny andro talohan’ny nanombohan’ny sekoly. Mbola tsy manana valiny amin’io fanontaniana io aho satria misy zavatra very raha tsy fantatry ny olona ny mankasitraka azy. Nipetraka teo aho, nanokatra ny pejy tsirairay tamin’ilay boky, namaky sy niezaka hahatakatra izay tian’ny mpanoratra hampitaina amin’ny tanora, toy ny torohevitr’ilay zokiny vavy niaraka tamin’ny zandriny lahy, izay nandany ny dimy volana lasa. dia mbola miaina isan’andro amin’ny fientanam-po sy ny faniriana hiaina ny fiainana feno ho an’ny fahatanorany ary iza no handalo izany dingana izany mba hilaza amintsika ny maha-sarobidy ny tanora. Namaky azy aho ary tsy nanenina!
Ny mpanoratra Rosie Nguyen dia tovovavy iray nahazo diplaoma tamin’ny sehatry ny Foreign Trade, Foreign Trade University, dia mpianatra literatiora nanana zava-bita lehibe nandritra ny taom-pianarana ambony.
Roise Nguyen dia bilaogera manampahaizana manokana amin’ny fanoratana momba ny tanora, tovovavy tia mandehandeha ary sady mpampianatra Yoga no manampahaizana momba ny fahasalamana. Ary indrindra indrindra dia olona nampianatra tena izy, mpitaingina entana, mpanonofy ary feno fitiavana ny fiainana. Rehefa nandalo ny fahatanorany izy dia nampita ny traikefany tamin’ireo tanora sahirana sy misavoritaka amin’ny fahatanorany.
Misy fizarana 5 ny boky:
Fizarana 1: Ahoana no nianarako?
Avy amin’ny fihaonana amin’ny “olona tena izy, zavatra tena izy” nandritra ny fahatanorany, i Rosie dia nizara tantara tamin’ny fomba tena “tena izy”. Ny fandinihan-tena no tiako ampahatsiahivina ny tanora, mikaroka sy mahita an-tsitrapo dia ho hita ny fitia ary fahalalana vaovao hatrany no miaraka aminao. Maro ny fomba tsy tena vaovao, fa rehefa mamaky ny boky ianao dia hahita toro-hevitra mahasoa amin’ny fampiharana azy: mamaky boky, mianatra amin’ny Internet, manao backpacks, mianatra amin’ny fahafinaretana, fa tsy miankina amin’ny sekoly…
READ Tổng hợp những câu trích dẫn sách hay nhất về cuộc sống | Anybook.vn
Ny zava-nisongadina tamin’ity ampahany ity ary koa manerana Ohatrinona ny lanjan’ny tanora?
Izany no hevitra: ny boky dia izao tontolo izao!
Raha afaka nindrana milina majika an’i Doraemon aho, raha afaka miverina amin’ny fotoana, raha afaka milaza zavatra iray monja amin’ny fahatanorako aho, dia ny safidiko: Mamaky boky bebe kokoa, ry adala!
Raha ny marina, ny famakiana ity boky ity fotsiny dia efa ampy hahatakaranao ny fomba namaky ny boky ny mpanoratra ary tsy misy afa-tsy ny boky no nanampy ny mpanoratra hanana fiainana mahafa-po toy ny ankehitriny. Eo am-piandohan’ny fizarana tsirairay amin’ny boky, Rosie dia manonona teny malaza avy amin’ny olona malaza iray, na dia amin’ny teny nosoratany aza dia misy ny eritreritry ny boky lehibe ary toa tsy ho vitanao ny mitanisa azy ireo. ireo boky voalazanao ao Ohatrinona ny lanjan’ny tanora? izay…
satria be loatra izy ireo. Ankoatra ny firesahana momba ny maha zava-dehibe ny boky dia manome fomba famakian-teny tena feno ho an’ny tanora koa ny mpanoratra. Ohatra, firy ny boky tokony hovakiana isan-taona, fara fahakeliny, inona ny karazana boky tokony hovakiana, ny fomba hitsarana ny boky tsara na ratsy, indrindra ny toro-hevitra momba ny fomba famakiana boky amin’ny fomba mahomby: manoratra foana Notes, ary tokony hamaky ny boky voalohany. satria amin’izay vao ho azon’ny mpamaky tanteraka ny hevitra tian’ny mpanoratra hampitaina ary hanana fahafahana bebe kokoa hampitombo ny fahaizany miteny vahiny.
Ny mpanoratra dia milaza fa: Ny famakiana boky dia tsy miantoka ny fahombiazana eo amin’ny fiainana, fa raha tsy misy azy dia saika tsy ho vita mihitsy ny ho tonga olona. Tsy dia tia boky loatra aho ka manana fomba fijery hafa kely noho ny mpanoratra. Raha ny marina dia hitako fa mbola betsaka ny olona tsy mamaky boky no lasa olona tena tsara, ny zava-dehibe dia tsy mamaky boky izy ireo fa mbola manohy mianatra amin’ny fiainana, avy amin’ny olona manodidina, amin’ny sarimihetsika , mozika sns dia mianatra tsy miato ary mampihatra izay ianarany tsy miato. Fintino rehefa vita ny famakiana Ohatrinona ny lanjan’ny tanora? Miaraka amin’ny hevitro manokana, heveriko fa manana ireto soatoavina manaraka ireto ilay boky:
voalohany. Afaka mianatra avy amin’ny loharano maro samihafa ianao, fa ny famakiana no fomba mahomby indrindra hianarana sy fomba mora indrindra hahatongavana ho olona, ​​olona manana toetra, fitondran-tena, talenta, fahendrena ary fahasambarana. Midika izany fa afaka misafidy ny hamaky ilay boky ianao na tsia, fa ny lalana tsy maintsy halehanao dia ho sarotra kokoa. Niezaka nitady ny quintessence ny mpialoha lalana mba hamintinana azy ao anaty boky, maninona raha mamaky azy ianao ary miezaka mafy hanenenana any aoriana.
2. Ny famakiana boky betsaka araka izay azo atao, fa ny boky tsara na ratsy dia miankina amin’ny fomba famakian-teny sy fampiharana azy, ny famakiana betsaka dia tsy tsara toy ny mamaky amim-pitandremana. Ny zava-dehibe indrindra rehefa mamaky dia ny mandinika sy mamerina manoratra ny hevitra tsaran’ny mpanoratra amin’ny fomba fijerinao manokana amin’ny fehezanteny fohy araka izay azo atao. Vakio ny ampahany kely tsirairay, ampiharo avy hatrany amin’ny fanazaran-tena mba hahatonga azy ireo ho fahazaranao, ary eritrereto ny hamaky ny tapany manaraka. Fa aza vakiana miaraka ary adino daholo ary tsy tadidiko ny lohatenin’ny boky na ny anaran’ny mpanoratra. Tsy maintsy averina vakiana imbetsaka ny boky tsara iray mba hahazoana ny hevitry ny mpanoratra.
READ Review sách: Đúng Việc - một góc nhìn về câu chuyện khai minh | Anybook.vn
3. Ny zavatra mahasoa hafa entin’ny boky dia ny fahaizana misaina manakiana. Raha mamaky boky ratsy ianao dia tsy mila miezaka mamaky azy fotsiny satria manenina ianao nividy vola kely, izay miteraka fahaketrahana sy fahaverezan’ny finoana ao amin’ny boky, fa indraindray mamaky ratsy, mamaky hafa. fomba fijery ihany koa, mianatra tsara, manatsara ny fahalalan’olombelona.
4. Ampitomboy ny fitiavana mamaky teny haingana araka izay tratra, koa fidio ireo boky tena ilaina hovakiana aloha. Tokony hamaky boky mba hanitarana fahalalana, hanome bebe kokoa, fa tsy ho amin’ny tanjona ratsy hafa, toy ny mamaky mba hirehareha ny amin’ny isan’ny boky novakiana, mba ho olona “cultured” ny olona. Dia izay, aza mamaky intsony fa ho reraka.
Fizarana 2: Mifanaraka amin’ny tongolobe ny fianarana
Tena zava-dehibe tokoa ny fahalalana, fa raha ny marina, ny fampiharana azy ireo dia indraindray ary azo lazaina ho manan-danja kokoa. Indrindra ho an’ny tanora, izay mijoro eo amin’ny tokonam-baravaran’ny fiainana amin’ny lalana tsy tambo isaina, tsy mahalala izay ho avy, tsy mahalala na hanohy na hijanona, inona no tokony hatao.marina indrindra. Ny roapolo tsara tarehy dia tena tsara tarehy, saingy misy ihany koa ny ahiahy maro.
Betsaka ny boky momba ny orientation ho an’ny tanora fa mbola tiako ny manana ity bokinao ity. Satria akaiky, azo ampiharina, manome soso-kevitra ho ahy, fa tsy dia lavitra toy ny boky maro hafa.
Thai Ngoc Dinh – Tanànan’ny Oniversite Open. Ho Chi Minh City
Ekeko koa ny hevitrao ity mpamaky ity. Amin’ny maha-fitsipika, ny mpanoratra amin’ny voalohany dia mampiseho antsika ny fomba hahatakatra ny tenantsika, avy eo dia manararaotra ny herintsika, manangana ny sehatra ho antsika manokana, ny mpanoratra dia manampy antsika hamantatra raha tokony hanaraka tsy tapaka ny filantsika eo amin’ny fiainana isika. asa no tena zava-dehibe. Tena nahavariana ahy ny hevitr’ilay mpanoratra hoe: Ny fitarihana ny asa dia asa mandritra ny androm-piainana. Ny fisainana toy izany dia hanampy ny tanora tsy hatahotra intsony rehefa mijoro eo afovoan’ny safidy, tsy ho very tombontsoa sarobidy noho ny tahotra ny hanao fahadisoana. Henoy ny antson’ny fonao hoe “alefaso fotsiny fa mamela ny aina”.
Heveriko fa ny olona tsy tia an’ity boky ity dia satria tsy tiany ny fomba fanaovana boky momba ny tena, na tsy mahay mamaky teny tsara, fa ny ankamaroany dia noho ny hakamoana. Eritrereto fa ny famakiana boky dia pejy vaovao amin’ny fiainana feno raozy nefa ny olona dia tsy ampy mamaky, nihevitra fa ny fihainoana torohevitra ao amin’ny boky dia hampamirapiratra ny masony fa tsy mora izany. Ampiasao im-polony, indraindray mbola tsy azonao, mainka fa mamaky azy dia mihira ilay hira hoe: “Vakio fotsiny ary ampiharo rahampitso” Ho avy ve izany andro izany?
Fizarana 3: Fomba fandinihan-tena ny mandeha an-tongotra
READ Hôm nay, khai mạc hội sách Công viên Thống Nhất, 23- 27/8 | Anybook.vn
Dia ho hitanao fa aorian’ny sidina dia manana fomba fijery feno kokoa momba ny fiainana ianao, mianatra zava-baovao vitsivitsy, ary feno kokoa ny fonao. Ary tiako kokoa ny toerana iainako, tia ny olona manodidina ahy, tia ny fiainana ary miaina mandritra ny fiainana mihoatra noho ny teo aloha.
Mianara amin’ny fomba mahomby indrindra, mandehana amin’ny toe-tsaina matotra izay ahafahanao misintona traikefa sarobidy eo amin’ny fiainana sy fahalalana matanjaka mba hahafahan’ny tanora matoky tena amin’ny tenany, miaraka amin’ny firehetam-po. Ny mandeha dia miverina. Ny fitsangatsanganana dia tsy mitondra traikefa eo amin’ny fiainana fotsiny fa manome anao fahasalamana be dia be, saina mazava, fa manatsara ny fahaizanao mifandray, mandamina ary manampy anao ho mavitrika kokoa. Raha ny marina, rehefa avy namaky ity boky ity aho dia te-hitondra ny valizy fotsiny, fa noho ny alina dia tsy maintsy nivoaka ny trano aho mba handeha tongotra vitsivitsy, hiresaka sy hihomehy miaraka amin’ny mpiara-monina vitsivitsy izay nanao fanatanjahan-tena ihany koa. Ny fiovana kely toy izany fotsiny dia manampy amin’ny fampiononana ny fanahy. “Mandehana isan’andro hianarana sivana hendry”. Nilaza ny raibe sy renibenay fa tsy diso izany.
Fizarana 4: Mamirapiratra alohan’ny hamirapiratra
Hanana fahafahana hipetraka sy hisaintsaina ny fiainanao ianao, ny lalana izoranao ary ny soatoavina tadiavinao. Ny tsirairay amintsika dia teraka manana talenta samihafa, fomba fijery samihafa momba ny fiainana ary samy hafa ny tanjon’ny fiainana. Rehefa dinihina tokoa, miaina amin’ny 100% ny herinao, dia tsy hanenenanao na oviana na oviana:
Ny fahombiazana dia lasa ilay olona nirianao taloha… Amiko, ny fahombiazana dia ny fiainana amin’ny fomba feno. Raha 5 ny fahafahanao, dia mipetraha amin’ny 5. Raha 10 ny fahafahanao, dia miezaha hiaina hatramin’ny 10.
Fizarana 5: Fanomezana fanampiny
Ity fizarana farany ity dia ahitana ireto zavatra manaraka ireto
Fandresena ny krizin’ny taona roapolo
Tsy zava-dehibe ny teny anglisy
Fandaharana fianarana samirery fa tsy mari-pahaizana maîtrise
Boky ho an’ny ankizy ao anatin’ny roapolo taona
Na dia fanomezana aza dia aza adino. Tonga miaraka amin’ny fanomezana, fa tena mahafinaritra. Kely nefa mahery ry zalahy.
Rehefa avy namaky ilay boky aho dia tsy afaka niteny afa-tsy hoe: “I Rosie Nguyen tena tiako”. Tsy midera azy anefa aho satria be mpividy. Mankasitraka aho fa manana valiny amin’ilay fanontaniana hoe “Ohatrinona ny hasarobidin’ny tanora? Ny fiainany manokana, niaina araka izay tratry ny heriny izy, niaina ho an’ny tenany, nanokana ny tenany tamin’ny filany, ary tsy nisalasala mihitsy na dia teo aza ny fahasahiranana sy ny fanamby, tsy natahotra ny tsy fahombiazana. Fohy ny fiainana, ny fahatanorana no taona mahafinaritra indrindra, ka izany no mahamaika azy. Ity boky ity dia nanentana ahy hamolavola ny fiainako manokana, ilay fiainana noheveriko fa tokony hiainana sy tokony hiainako. Tsy nanenina mihitsy aho namaky ity boky ity ary mino aho fa hanao izany koa ianao
Famerenana amin’ny antsipiriany nataon’i: Thuy Duong – Bookademy
Araho ny pejy mpankafy Bookademy raha te hanavao vaovao mahaliana momba ny boky amin’ny rohy: https://www.facebook.com/bookademy.vn
Misoratra anarana ho Bookademy CTV amin’ny rohy: http://bit.ly/2Hxkazt
Previous: Công thức tính Chu vi & Diện tích Hình Tròn | Anybook.vn
Next: Chuyên nghiệp là gì? Tầm quan trọng của chuyên nghiệp trong công việc – | Anybook.vn